I-Semalt Expert Ichaza indlela iibhokhwe ezizalwe ngayo kwi-Spam
UMichael Brown, uMphathi weNtengiso kuMthengi we-Semalt IiNkonzo zeDivarti, uye waqulunqwa kwinqaku elithile eliqulunqa iinyani malunga nemvelaphi yogaxekile.
Umyalezo wokuqala wogaxekile uthunyelwe ngo-1994. Ngaloo xesha, uLaurence Canter noMargaret Siegel babhala inkqubo eyithumele isikhangiso kwiinkonzo zamaphepha e-lottery e-green card. Bathumele lo myalezo kuwo onke amalungu e-Usenet News Group, kwaye kwakukho amalungu angaphezu kwamawaka angamawaka awafumana lo myalezo.
Ngenxa yeendlela ezahlukileyo umyalezo othunyelwe ngawo, abathengi be-Usenet behlulekile ukufumana iikopi eziphindwe kabini, kwaye abasebenzisi babone iikopi zemiyalezo efanayo kuwo onke amaqela - equipment surveillance uk video. Ngelo xesha, ukusetyenziswa kwezorhwebo kwi-intanethi kunye nezixhobo ze-intanethi kwakungaqhelekanga. Ngaphezulu, ukufikelela kwi-Usenet kwakubiza kakhulu kunezinye. Uninzi lwabasebenzisi babecinga ukuba imilayezo ebonakalayo yorhwebo yayingenanto. Abazange bathathe ixesha labo kuphela kodwa baxabise imali eninzi kubasebenzisi.
Kamva, isiganeko sekhadi eliluhlaza sabanjwa ngabanye. U-Arnt Gulbrandsen wavelisa umxholo wee-barcelbots, eza kamva zifaniswa nomxholo wemilayezo yemiyalezo yogaxekile. Emva koko, yathunyelwa kumthumeli wangempela ukuze kuqinisekiswe. I-Canter no-Siegel baphinda ngokuphindaphindiweyo inkqubo. Abasebenzisi abakwazanga ukudibanisa ugaxekile kwaye bahluleka ukukhansela imilayezo kwisiphakeli se-Usenet..Amanyathelo okulwa nogaxekile nawo athatyathwa, kodwa konke akunanto.
Kwakungokuqala kwe-spam yorhwebo kunye ne-Usenet spam. Ngaphambi ko-Ephreli 1994, uSedar Argic waphendula kwimiyalezo emininzi ethi wayenqabe ukutshabalaliswa kweArmenian. Kubonakala ukuba kwakungekho isigqibo esisilumko, kwaye izinto zafuneka ukuba zitshintshwe yiyo yonke.
Indlela yokuqala ye-Usenet spam yimiyalezo eyayithunyelwa kubasebenzisi abaninzi kwi-intanethi. Ngakolunye uhlangothi, i-Cancelbots isebenza kwimilayezo efanayo kunye nokuzama ukuqinisekisa ubungqina babo. Ekugqibeleni, ixesha lafika xa ii-Usenetters zisebenzisa i-teknoloji ephambili zifumene isisombululo kule ngxaki. Usosayensi waseRashiya u-Andrey Markov waqulunqa ibhobho ngo-1913 kwaye wasebenzisa iindidi zamaphepha ukuze kuveliswe izihlungi.
Kwathatha ixesha logaxekile ukuba baqonde ukuba i-cancelbots yahlutha ngokufaka ii-junks ezikhethiweyo ekupheleni kwayo yonke imiyalezo. Ngaloo xesha, abagaxekile bahambisa u-Usenet kwiindidi ezahlukeneyo ze-imeyile, ukuqinisekisa ukuba bahlasela onke ama-ID e-Yurophu nakuma-America. Abantu abaninzi baye bazinikezela ekucingeni uhlobo logaxekile kwaye bazama ukulwa nabagaxekile kwi-intanethi. Iingxelo ezingezizo zabantu zenziwe ngenjongo yokuphanda ukuziphatha kwabagculeli kwi-intanethi. Ubuchwephesha obutsha buphuhlisiwe, kunye neentlobo ze-spammers ezahlukahlukeneyo zatshatyalaliswa ngamaseva abo. Ngakolunye uhlangothi, i-spammers yaqulunqa ingxaki kwaye yaphuhliswa kwezobuchwepheshe obubhetele ngakumbi kunoko. Baye bahlakulela iindlela ezichasene nezihlunu ze-Google Analytics.
Kwi-spammers, i-Bayesian yenza imilayezo ukuze iqinisekise abasebenzisi ukuba bayamkeleka kwaye bayathembeka. Kwaye kwadalwa imicu emide neyifutshane yamagama angahambelaniyo, kwaye le nqubo yaba yinto evamile kwaye yayisasazeka ngexesha.
Ngo-2010, i-Amazon yazisa i-eBook isitoreji kwi-intanethi, kwaye umncedisi wayo wayekhukhumezekile ngeentlobo ezininzi ze-spammers. Njengamanje, amaninzi amaninzi asetyenziswe ukujongana nenani elikhulu labagaxekile kunye nabahlaseli kwi-intanethi.